Gịnị mere na-ejegharị Site Train bụ Environmentally Enyi na Enyi | Save A Train
Home > Njem ụgbọ oloko > Gịnị mere na-ejegharị Site Train bụ Environmentally Enyi na Enyi
(Emelitere ikpeazụ On: 27/03/2021)
okporo ígwè iga bụ ihe kasị gburugburu ebe obibi-enyi na enyi ụzọ njem. Griin haus mmetụta nke gas umu anwuru kwa kilometa na ụgbọ okporo ígwè iga bụ 80% erughị ụgbọala. Ná mba ụfọdụ, pekarịrị 3% nke niile iga gas umu anwuru-abịa site na ụgbọ oloko. The naanị ụzọ ọzọ environmentally friendly karịa ụgbọ oloko na-eje ije na ịgba ígwè. Ebe ahụ na-ọtụtụ ihe mere ị na-ahọrọ na-eme njem ụgbọ okporo ígwè bụ environmentally friendly na anyị ga-achọ ịkọrọ ndị a na ị!
A na-ahụkarị ụgbọ okporo ígwè akara pụrụ ibu 50,000 ndị mmadụ kwa hour. Tụlee nke a na a freeway uzo, nke nwere ike ime naanị 2,500 ndị mmadụ kwa hour.
Akwukwo nke Nigel C Williamson kesara (@therealnigelcw)
Mgbe iche moto iga na okporo ígwè, mpụga akwụ ụgwọ, mkpọtụ, ikuku ndu, ihe mberede, na akụrụngwa arịa ọrịa, na mkpọchi dị nnọọ ala na ụgbọ oloko karịa iji a onwe ụgbọala.
Noise mmetọ – Gịnị mere ị na-ahọrọ na-eme njem ụgbọ okporo ígwè bụ environmentally friendly
Noise mmetọ bụ oghom mmetụta nke mkpọtụ ma ụmụ mmadụ na anụmanụ. Ọ bụ a kpọmkwem n'ihi ogbenye mepere emepe atụmatụ. Nsogbu si mkpọtụ mmetọ ụbọchị azụ Rom oge ochie! taa, mkpọtụ mmetọ si ụgbọala nwere ike ime ka emebi mmadụ psychological ala. Mgbaàmà-agụnye ọbara mgbali, elu-nchegbu etoju, tinnitus, ụra nsogbu, na ndị ọzọ na-emerụ mmetụta.
Ugbu, enwere ihe na-amachi mmetụta nke-enwu n'okporo ụzọ mkpọtụ. jikoro gụnyere mkpọtụ mgbochi, ịmachi ụgbọala gbapụrụ ọsọ, na-agbanwe agbanwe-enwu n'okporo ụzọ udidi, nakwa dị ka okporo ụzọ njikwa na enyere ezigbo ụgbọala eruba. Nke a pụtara na ụgbọala na okporo ụzọ akara usoro ga-mkpa na-eji ha brek na osooso obere.
The ụgbọ okporo ígwè bụ environmentally friendly na nke ahụ bụ oké egwu. India na-ahụ ahịa nke ụgbọala na-amụba na-eme kwa afọ ndabere. China na-atụghị nwere 300 nde ụgbọala n'okporo ụzọ site 2030. Aviation na ụgbọ mmiri njem na-na-na-agbakwụnye na zuru ụwa ọnụ CO2 anwuru. Ọ na-egosi na n'ime niile ụdịdị nke iga, ọ bụ naanị ụgbọ oloko na-eme ka ikuku mmuo belata adigide maka ọdịnihu.
Electric na ngwakọ ụgbọala doro anya na mma maka gburugburu ebe obibi ka omenala ụgbọala, ma nsogbu taa bụ na ndị a ụgbọala bụ oke ọnụ na-ere a larịị ga-akwado ndị na-ezighị ezi pụta nke ụgbọala.
Dizel ụgbọ oloko na electric ụgbọ oloko
E nwere ọdịiche dị n'etiti dizel ụgbọ oloko na electric ụgbọ oloko. electric ụgbọ oloko emit 20-35% obere carbon karịa mmanụ dizel. A ụgbọ okporo ígwè bụ environmentally friendly karịsịa Electric ụgbọ oloko na-kwadoro site na ogbara ohuru na-enye carbon-free njem. umu anwuru si ụgbọ oloko na Europe ga-ebelata site a n'ihu 50% site 2030. A na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu ebe ọ bụ na ụgbọ oloko na akaụntụ maka 8.5% nke niile njem ọrụ.
Akwukwo nke Dave Wheeler kesara (@davewheelerstudio)
Ụgbọ oloko ma ọ bụ ụgbọ elu – mere ị na-ahọrọ na-eme njem ụgbọ okporo ígwè bụ environmentally friendly
Isi ihe dị mkpa mgbe atụnyere ụgbọ oloko na ụgbọ elu bụ na ụgbọ elu mkpa na-eji ihe ịrịba ego nke mmanụ ụgbọala ma takeoff na ọdịda. Ọzọkwa, mgbe ndị mmadụ na-eme njem site na ụgbọelu, ha na-esi na ọdụ ụgbọ ala. Nke a na-agbakwụnye na CO2 anwuru maka njem ha. Nke a na-eme ka na-ewere ihe intercity ụgbọ okporo a dịghị-brainer maka gburugburu ebe obibi.
E nwere ụfọdụ na-adịbeghị anya na-, karịsịa maka ndị mmadụ ejegharị ejegharị maka azụmahịa ndị na-asian site njem mmadụ nke carbon mmetụta nke ha flights. Ọzọkwa, wezụga gburugburu ebe obibi, o siri ezigbo ike rute n'etiti obodo ụgbọala, ebe, ma ọ bụrụ na ị bụ na a ụgbọ okporo ígwè, i nwere kpọmkwem ịnweta mepere emmepe. Nke a, karịa bụghị, pụtakwara na a na-ọtụtụ ihe ngwa ngwa na-eme njem ụgbọ okporo ígwè karịa ihe ọ bụla ọzọ usoro.
Na ngwụcha, a ụgbọ okporo ígwè bụ environmentally friendly na ndị kasị gburugburu ebe obibi-enyi na enyi ụzọ njem na-enyekwa mma maka ndị mmadụ na-eme njem ma azụmahịa na obi ụtọ. The abawanye na ụgbọala n'okporo ụzọ pụtara na mkpọchi na mmetọ na-na-abawanye na ụgbọ okporo ígwè bụ iga azịza iji chebe gburugburu ebe obibi.
Ị na-achọ ịzụta gbaa ụgbọ okporo ígwè na-enweghị ntinye akwụkwọ ụgwọ? gaa www.saveatrain.com ka ịnweta ndị dị ọnụ ala ụgbọ okporo ígwè udu.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwhy-choosing-to-travel-by-train-is-environmentally-friendly%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe fr ka de ma ọ bụ na ọ na ndị ọzọ na-asụ asụsụ.
#electric gburugburu ebe obibi Train Travel Travel
Njem ụgbọ oloko, Zụọnụ Travel China